Horyaalka Kubadda Cagta ee Ciyaartoyda Culusaatay oo Maanta Si Toos ah uga Bilaabmay Minneapolis -
Jiirooniga kubadda cagta ee Ciyaartoyda Culusaatay ayaa shalay oo ay taariikhda bishu ahayd 6/27/2017 si toos ah uga bilaabmay magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Horyaalkan loogu magac daray, ” Jiirooniga Ciyaartoyda Culusaatay” ayaa waxaa ku tartamaya, kana soo qaybgaley sideed kooxood oo ka kooban ciyaartoy iyagu kamid ah bahda isboortiska ee ku dhaqan gobolka Minnesota.
Tartankan oo socondoona mudo saddex bilood ah ayaa haddaba waxaa loo qabtay ciyaartoyda da’doodu ka weyn tahay 30 sanno. Horyaalkan oo si heer sare ah loosoo agaasimay oo ka dhacaya garoonka kubadda cagta ee Currie Park ayaa waxaa ku soo xaadiray garoonka oo ku yaala xaafada ay Soomaalidu u badan yihiin ee Cedar daawadeyaal aad u badan.
Ciyaarihii maanta lagu furay horyaalka ayaa ahaa afar ciyaarood. Maalmaha Talaadada iyo Khamiista ayaa si joogta ah loo qaban doonaa ciyaaraha ay isku arkayaan kooxaha ku loolamaya koobka horyaalka. Ciyaartooyda culusaatay oo aan fursad u helay in aan wax ka weydiiyo dareenkooda ku aadan horyaalkan loo qabtay dhallinyaradda culusaatay ee iyagu kamid ah bahda isboortiska reer Minnesota ayaa iyagu ii sheegay farxadda iyo reeynreenta ay u hayaan jiirooniga loo qabtay.
Haddaba Ciyaartoyda Culusaatay ee reer Minnesota ayaa halkaasi kusoo bandhigeen ciyaaro xirfad sare leh, isla markaana aad ay ugu qanceen dad weynihii usoo daawashadda tegay. Tababare Adam Ugaas oo ku magac dheer “Jay Blue”, ahna shaqsi aad uga dhex-muuqda jalliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo waliba bahda isboortiska ayaa isagu soo abaabulay horyaalkan. Horyaalkan oo sannad walba la qabto xiliga qaboobaha sannadkan loo badalay xiliga xagaaga.
Qaabka loo soo aqaasimay horyaalkan iyo jiiroonigan ayaa aad iyo aad uga duwan tartamada kale ee sida joogtadda ah loogu qabto gobolka Minnesota. Dhamaan kooxaha ka qaygalaya horyaalkan ayaana laga qaadin wax dhaqaale ama xarashka lagu bixiyo diiwaangelinta iyo ka qayb qaadashadda tartankan. Balse, kooxaha iyo ciyaartoyda ay ka kooban yihiin ayaa iyagu is xilqaamay oo go’aan kula gaaray in ay si wadajir ah iyagu iskaga bixiyaan dhamaan wixii kharash ama dhaqaale ah ee ku baxaya garsooraha u qabanaya ciyaaraha iyo waliba billadaha, koobabka iyo guud ahaanba abaalmarinta la bixin doono marka horyaalku uu dhamaado.
Wixii natiijooyin ah iyo waliba akhbaar dheerad ah ee ku soo kordha horyaalka Ciyaartoyda Culusaatay ee gobolka Minnesota waxaad kala socotaan Wargeyska iyo bogga Tusmo Times.